Ny fanambarana nataon'ny mpanotrona an'i Donald Trump, mpilalao sarimihetsika malaza Stormy Daniels dia nanohy nanonta
Ny fiainan'ny fiainan'ny filoha amerikana dia mbola liana hatrany amin'ny mpanao gazety. Vao haingana, In Touch Weekly dia namoaka fanadihadiana tena mahaliana miaraka amin'ilay mpilalao horonantsary filalaon'ny olon-dehibe Stormy Daniels. Nosoratana tamin'ny 2011 izany, na dia talohan'ilay lazaina fa tompom-pahefana aza i Trump dia nalaza tamim-pahanginana noho ny fahanginany. Tao anatin'ny resadresaka nifanaovan'ny mpanao gazety, ilay tovovavy dia nilaza tamintsika ny momba ny olom-pantany niaraka tamin'i Donald Trump sy ny fihaonana voalohany nataony tsy misy henatra.
Araka ny filazan'ilay mpilalao sarimihetsika, taorian 'ny taovam-pananany voalohany dia trotraka be i Trump ka nampanantena fa hihaona aminy indray. Ny olom-pantany dia nitranga tao Lake Tahoe, tamin'ny fialam-boly iray - fifaninanana golf. Nilaza i Stormie fa nandinika tsara ny tarehiny i Donald, ary nanatona azy ary niteny.
Ilay miliaridera dia nanolo-kevitra ny fisakafoanana amin'ny lolo sy ny lamaody ao amin'ny efitranony, ary i Stormie dia nanaiky nanaiky. Tamin'izany fotoana izany dia nandao ny indostrian'ny pôrnôgrafia izy ary niasa tamina orinasa lehibe. Rehefa nanontaniana izy hoe nahoana izy no niara-nisakafo tamin'ny Trump, dia namaly i Daniels fa toa lasa olo-manan-tsaina izy. Ny filoha amerikana amin'ny ho avy sy ny kintana amin'ny pôrnôgrafia dia nanana fotoana tsara: nisakafo izy ireo, nifampiresaka, ary avy eo nandeha ilay tovovavy. Rehefa niverina tao amin'ilay efitrano izy dia efa nandry teo am-pandriana i Trump ary niandry azy.
Tsy noho ny vola ...
Ary avy eo, ny zava-drehetra dia tahaka ny amin'ny sarimihetsika adolantsa, raha ny marina amin'ireo mpanoratra no tena romantika:
"Rehefa nanao ny fitiavana izahay, dia nieritreritra fa tsy tiako izy hanome vola ahy. Faly aho! Saingy fantatro fa handoa vola be izy. Marina izany - niara-niasa tsara izahay. Nanome toky ahy izy fa tsy afaka ny hieritreritra ny vadiny aho. Ary rehefa tapitra izany dia nentin'i Donald tany amin'ny hotely aho. "
Araka ny hitanao dia nanomboka tamin'ny fomba tsy nanan-tsiny ny zava-drehetra, ary nitondra fotoana nahafinaritra ho an'ireo tia roa. Saingy nanapa-kevitra i Trump fa hamefy sy handoa an'i Stormy amin'ny fahanginana amin'ny $ 130,000. Araka ny blondy iray mihetsiketsika, ny heriny tamin'ny Trump dia naharitra herintaona - nanomboka tamin'ny 2006 ka hatramin'ny 2007. Ankoatra izany, vetivety dia norahonana izy fa mety ho voany be izy sy ny zanany vavy , raha toa ka manjary ampahibemaso ity vaovao ity.
Herisetra indray izao: Donald Trump dia adinon'ny vahoaka mankalaza ny Melania Trump amin'ny Andron'ny Mpinamana
Ny vadin'ny filoham-pirenen'i Etazonia Melania Trump dia nijaly tamina fiasana sarotra tamin'ny voa
Amin'izao fotoana izao, ny solontenan'ny Trump dia mandà tanteraka ny raharaha amin'ny Stormi Daniels sy ny fandoavana ny tamby.
Lily-Rose Depp sy Natalie Portman ao amin'ny horonan-tsary "Planetarium"
Richard Gere dia nivarotra ny taniny tamin'ny antsasaky ny vidiny mba hisara-panambadiana
Ny marary anorexic Tara Reed mila hopitaly?
Kaitlin Jenner mandeha an-dalamby eny amoron-dranomasina: "Nanonofy azy aho nandritra ny androm-piainako"
Nanaitra ny mpankafy i Britney Spears tamin'ny fihirana hira velona
I Ilon Mask dia naneho hevitra voalohany momba ny fifanarahana tamin'i Amber Hurd
Ny Pantheon any Roma
AAA ny bateria?
Dresses lava ho an'ny fizarana grady 2014
Hividy sigara ao amin'ny oven
Ny fampivoarana ny endriky ny endriny - ny zavatra rehetra ilainao hahafantarana momba ny fandefasana sy ny tsy fisorohana
Ahoana ny famelombelona ny fifandraisana?
Sinoa bitika - varieties
Ny volo amin'ny vehivavy ho an'ny volo lava
Masaka amin'ny parsley
Ny modely malaza indrindra eran'izao tontolo izao
Fiterahana any an-trano